हिलाम्मे र धुुलाम्मे खोला कहिलेसम्म ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / हिलाम्मे र धुुलाम्मे खोला कहिलेसम्म ?
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड May 19, 2019	0 63 Views
घोराही । लमही–घोराही–तुुलसीपुर सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने बबई, कटुवा, गुुर्जे, पत्रे र संक्रामखोलामा गरी पाचवटा पुुलको निर्माण शुरु भएको झण्डै पा“च वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि शुरु भएका हुुन्।
निर्माण शुरु गरेको पा“च वर्ष पुगिसक्दा पनि खोलामा निर्माणाधीन पुल अझै सम्पन्न हुुन सकेका छैनन्। निर्माण शुरु भएको दुुई वर्षभित्र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्म पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुने भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सकिनै लाग्दा पनि पुल निर्माणले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
समयमा पुल निर्माण नहु“दा वर्षामा मात्रै होइन हिउ“दमा पनि उस्तै दुःख छ। पुल निर्माणाधीन खोलाहरुमा गतिलो डाइभर्सन नहु“दा वर्षामा हिलो र हिउ“दमा धुलोको सामना गर्नुु परिरहेको घोराही–१० नारायणपुरका जनक बुुढाले बताउनुुभयो। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘खै कहिले बन्ने पुल, कहिले सकिने हो यो दुुःख ?’ नारायणपुरबाट घोराही जा“दा आजभोली धुलोले कपडा मात्रै होइन नाकसमेत भरिएको हुुन्छ। नियमित घर र घोराही गर्नुुपर्ने बाध्यताले पुलको समस्या धेरै भोग्नु परिरहेको उहा“ले गुुनासो पोख्नुुभयो।
पुल निर्माणाधीन खोलाहरुमा हिलो र धुलो मात्रै होइन। जताततैका खाल्टाखुुल्टीले समेत दुुःख दिइरहेको उहाले बताउनुुभयो। दैनिक आवातजावत गर्ने सबैले ती खाल्टाखुुल्टीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। मोटरसाइकलदेखि एम्बुलेन्समा सवार सुुत्केरी, गर्भवती, चोटपटक लागेका घाइते अपांगहरुले समेत ती खाल्टाखुुल्टीको पीडा सहनुु परिरहेको तुलसीपुर–१६ का बुद्धिराम केसीले बताउनुुभयो। उहाले भन्नुुभयो– ‘कहिलेसम्म यो दुःख भोग्ने ?’ निर्माण कम्पनीको लापरवाही र ढिलासुस्तीले मात्र नभई राज्यकै कमीकमजोरीका कारण सर्वसाधारणले यो पीडा भोग्नुु परिरहेको उहा“ले गुुनासो गर्नुुभयो। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘धुलो हिलो खानुुपर्ने, बाढीले छेकिनुुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म भोग्ने हामीले ?’
खोलामा पुल बन्न लागेको पा“चवर्ष भयो। तर अझै बनिसकेका छैनन्। अब बन्छ, यो वर्षको वर्षा खोलाको दुःख टर्छ कि भन्यो। त्यो वर्ष पनि त्यस्तै। पुल बन्न लागेको र सरिया तेस्र्याएको वर्षांै बितिसक्दा पनि अझै उस्तै छ। सधै हामीलाई खोलाकै पीर छ। तर पुल अझै बनिरा’छ भन्दै तुलसीपुर–७ का मनकलाल चौधरीले गुुनासो पोख्नुुभयो। सधैं बनिरहने मात्रै, बनेर कहिल्यै नसकिने पुलले यो वर्षको वर्षामा दुख दिन्छ कि भन्ने डरले आफू तर्साइरहेको उहा“ले सुनाउनुुभयो। उहा“ले भन्नुभयो–
‘यो साल सकिन्छ कि भन्न लागेको तीनवर्ष जति भयो। हेर्दा सकिन्छ सकिन्छ जस्तो देखिन्छ तर अहिले पनि सकिन्छ कि सकिदैन ?’ हरेक वर्ष वर्षातमा त्रास बोक्नुु परिरहेको उहाले बताउनुुभयो। उहा“ मात्र होइन निर्माणाधीन पुलको दुुख सबै दङालीहरुले भोग्नुु परिरहेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सम्बन्धित कार्यालयहरुको मौनताका कारण दुुःख भोग्नुपरिरहेको सर्वसाधारणको गुुनासो छ।
बबई, कटुवा, गुर्जे र सक्रामखोलामा निर्माणाधीन पुलको काम आगामी असारसम्म सक्ने तयारी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। यो वर्षको वर्षातमा खोलाको दुुःख सर्वसाधारणले झेल्न नपर्ने गरी निर्माणाधीन पुल निर्माणको काम सक्ने तयारीका साथ काम भइरहेकाले आगामी असार
मसान्तसम्ममा पत्रेखोला बाहेक अन्य पुलको निर्माण सकिने इञ्जिनियर क्षितिज पोख्रेलले बताउनुुभयो। असारमा सक्ने गरी सबै पुलहरुमा काम भइरहेकाले यो वर्खामा खोलाको दुःख टार्ने गरी काम भइरहेको उहा“ले बताउनुुभयो।
‘पत्रेखोलामा बाहेक अन्यमा म्याद थप गरी काम भइरहेको छ। तर निर्माण कम्पनीले कति चा“डो काम गर्छन् त्यो भन्न सकिदैन। हामीले दिएको समयमा काम सकिनुुपर्ने हो’– उहाले भन्नुभयोे– ‘पुल निर्माणको महत्वपूर्ण काम सकिएका छन्। बा“की फिनिसिङको मात्रै काम बा“की छ। तीब्ररुपमा काम गर्न सके असारमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुुनेछ।
Previous: नेपालमै भारतीयको घेरामा सांसद !
Next: बहुउपयोगी कृत्रिम जलाशय, आरोग्य जलाशयमा दुई क्वीन्टल माछा